S.E.E विद्यार्थीका लागि दु:खद खबर : इतिहासमै सबैभन्दा अभागी विद्यार्थी बन्नेछन् ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/S.E.E विद्यार्थीका लागि दु:खद खबर : इतिहासमै सबैभन्दा अभागी विद्यार्थी बन्नेछन् !
S.E.E विद्यार्थीका लागि दु:खद खबर : इतिहासमै सबैभन्दा अभागी विद्यार्थी बन्नेछन् !
वहस एसईईका बारेः २०७७ सालको एसईईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई भाग्यले पिरेको भन्ने वा के भन्ने ? ठ्याक्कै मसँग सुहाउँदो शब्द भएन । त्यसका लागि माफी चाहन्छु । २०७६ सालका विद्यार्थीले एसईईका लागि निकै मिहिनेतका साथ पढे ।
तयारी गरे । तर परीक्षामा सम्मिलित हुनुपरेन । हो, केही विद्यार्थीको भविष्यमाथि शिक्षकले खेलवाड गरे वा न्याय गर्न सकेनन् । अर्थात् उनीहरुको क्षमताभन्दा बढी वा कम अंक दिए ।
अ.पहरणमा परेकी भनिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको ९ दिन पछी आज जंगलमा लहरामा अल्झिएको अवस्थामा श’व फेला (भिडियो)
अस्पतालबाट नविन्द्रराज जोशीको पा’र्थिव शरिर नि’काल्दा चल्यो रु’वाबासी, सबैका आँखा रसाए ।
इतिहास मै पहिलो पटक सुनको मूल्य यती धेरै ले ह्वात्तै घट्यो, हेर्नुहोस् बिवरण